9.2.2016 | အသုံးများဆေးဝါးများ
အသည်းကင်ဆာ (Liver Cancer)
9.2.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အသည်းကင်ဆာသည် အသည်းဆဲလ်များမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်သောကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းဟာ ဘောလုံးတစ်လုံးစာအရွယ်ရှိပြီး ၀မ်းဗိုက်ညာဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါတယ်။ အဖြစ...
9.2.2016 | အရေးပေါ်ကုသနည်းများ
1. ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားခြင်းရှိမရှိ၊ အသက်ရှူ မရှူ ကြည့်ပါ။
2. အသက်ကောင်းစွာရှူနေပြီး ဒဏ်ရာရထာ...
8.2.2016 | အသုံးများဆေးဝါးများ
8.2.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
ဆီးအတွင်း အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် (Calcium) ကယ်လ်စီယမ် (သို့) အောက်ဆဲလိတ် (Oxalate) (သို့) ယူရစ်အက်ဆစ် (Uric Acid) အမှုန်များ စုပုံအနည်ကျရာမ...